Nin Soomaali oo xaaskiisa oo 6 caruur ah u heysay ku dilay dalka Norway – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nin Soomaali oo xaaskiisa oo 6 caruur ah u heysay ku dilay dalka Norway
Mareeg.com: Wararka ka imaanya dalka Norway ayaa sheegaya in nin Soomaali ah uu halkaas ku dilay xaaskiisa oo u heysay 6 caruur ah.
Dilka ayaa ka dhacay magaalada Askoy oo waxoogaa ka baxsan Caasimadda labaad ee Norway ee Bergen.
Hooyada uu ninkaasi dilay ayaa da’deeda la sheegay in ay eheyd 39 jir oo 6 caruur ah u dhashay ninkaasi oo gacantiisa ku dilay. Carruurta ay haweeneydaan ka tagtay ayaa kan ugu jiraa hal sano, kan ugu weyna wuxuu jira 18 sano.
Ninkan ayaa markii dilka geystay kadib iska xaadiriyey saldhiga booliska, wuxuuna dalbaday in la xiro, waxaana markii booliisku ay tageen guriga u cadaatay in uu dilay haweeneydaasi.
Lama oga oababta Ninkaan Soomaaliga ah uu Xaaskiisa Midida ugu dilay, waxaana uu intaa Raaciyay in Ninka Dilka geeysatay uu Saldhiga Ciidamada Norway ay leeyihiin uu is geeyay.
Dadka Soomaaliyeed ee jooga Norway ayaa walaac ka muujiyay arinkani, iyadoo dhacdadani xanuun badan ay ku tahay caruurta hooyadaasi allaha u naxariisto ee la dilay.
Sida ay sheegayaan wariyaasha ku nool dalka, Norway, 4 Haween Soomaaliyeed ah ayaa raggii ay u dhaxeeni ku dileen dalkas.
Madaxda maamulada gobollada dalka Iyo Madaxweynaha oo manta wada qadeenaya(Sawirro)